FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY ANGLISY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika mpiandry anglisy
Axl ilay mpiandry anglisy lahy amin'ny 3 taona— 'Tena be fihetsika be izy rehefa tsy ampy fanatanjahan-tena , tia misolelaka, mora zatra, mahafinaritra amin'ny ankizy ary biby hafa , ary mila fitandremana avy amin'ny tompony ary maniry ny hampifaly azy. '
Mpiandry omby vavy ING
Ny mpiandry anglisy dia mavitrika, manan-tsaina, mavitrika tokoa, mailaka, be herim-po ary mahasosotra. Tsy matahotra noho ny tanjony. Mihetsika avy hatrany rehefa baikoina mamaly tsara ny feon'ny tompony. Adaptory saika indray mandeha miaraka amin'ny baiko miasa manodidina ny tahiry fiompiana. Ny toetra miasa dia misy: heels ambany tokoa ary tena afaka amin'ny alàlan'ny nifiny. Miambina be koa ho mpiambina ny trano. Miaraka amin'ny tompony. Alika fitehirizana voalohany, ny Anglisy Mpiandry Ondry dia efa zatra ampiasaina hihazaza ary toy ny mpiambina ankoatran'ny biby fiompy ao amin'ny fianakaviana. Vao tsy ela akory izay dia nitombo ny fahalianana tamin'ny Mpiandry anglisy amin'ny alàlan'ny atleta amin'ny hetsika fifaninanana toa ny mailaka, Flyball ary Frisbee. Ny olona sasany dia mety miavaka amin'ireo hetsika rehetra ireo, fa ny ankamaroany kosa dia hanana tanjaka sy fahalemena amin'ny tanjona iray na hafa. Mahafinaritra amin'ny ankizy fa tsy alika mahery amin'ny alika hafa amin'ny ankapobeny, tsara miaraka amin'ny biby hafa izy ireo raha notezaina niaraka tamin'izy ireo hatramin'ny alika kely. Alika sakaiza amin'ny ankapobeny, na izany aza, dia azo atokana miaraka amin'ny olon-tsy fantatra izy ireo. Manamboatra alika mpiambina mahafinaritra izy ireo, mampandre ny tompon'olon-tsy fantatra. Ny Mpiandry anglisy dia mila mafy orina, nefa tony, matoky tena, tsy miovaova mpitarika fonosana mba ho milamina ara-tsaina .
Milanja: Lehilahy 45 - 60 pounds (21 - 28 kg) Vehivavy 40 - 50 pounds 18 - 23 kg)
Hita tao amin'ny karazany English Shepherd ary koa ny ankamaroan'ny karazan-trondro hafa. Noho io antony io dia tombontsoanao indrindra ny misafidy alika kely amin'ny ray aman-dreny izay nohamarinina tamin'ny taona 2 na mihoatra ary efa nohamarinin'ny OFA na GDC mba ho afaka amin'ny dysplasia hip sy displasia siko. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ity karazana ity dia tsy tokony hatao amin'ny fiainana an-trano. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny.
retriever volamena kely efa lehibe
Mila raisina ity karazany ity mandeha isan'andro na jogging.
Tokony ho 15 taona
Alika kely 5 - 8, 6 eo ho eo
Mora tehirizina ny palitao ary tsy mila fiheverana kely. Borosio indraindray amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy ilaina. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Araka ny angano, ny Mpiandry anglisy dia alika ondry sy omby romana madio, nentin'i Kaisara tany amin'ny Nosy Britanika tamin'ny fotoana nanafihany tamin'ny taona 55 talohan'i Kristy. Nampiasainy ireo alika ireo mba hiompy ny biby fiompy nentina namahana ny miaramilany. Rehefa lany ny biby fiompy, alika ambim-bava sisa tavela teny an-dalana, ary nampiasan'ny tompon-tany teo an-toerana ary nifampidinika tamina karazan'alika misy talenta 'mpiandry' mitovy amin'izany, hanamafisana ireo fahatsapana voajanahary ireo. Ny Mpiandry anglisy dia nentin'ny sasany tamin'ireo voalohany nipetraka tany amin'ny zanatany amerikanina ary nanaraka ny fivoaran'ny Etazonia nanomboka tany atsinanana ka hatrany andrefana. Ity karazan-jaza maro karazana ity dia sarobidy tokoa satria nampiasaina hiompy biby fiompy sarobidy sy hiarovana ireo tokantrano mitokana. Ny United Kennel Club no mpitan-tsoratra tany am-boalohany an'ny English Shepherd ary niaiky hatramin'ny 1934.
ARF - Fikarohana momba ny biby
Axl ilay mpiandry anglisy lahy amin'ny 4 taona
Axl ilay mpiandry anglisy anglisy ho alika kely
Mpiandry anglisy - ny lahy tricolor dia Roper mandritra ny 6 taona ary ny sable mainty kosa dia Boots amin'ny 5 taona
Boots miaraka aminy fako fako alika
'Ity i Bandit, alika kely Shepherd Anglisy 4 volana. Mipetraka ao an-tanàna izahay, fa manana akoho amam-baravarana, izay novonoin'ny voromahery iray tamin'io, ka nahazoanay Bandit hikarakara azy ireo. Miaraka amin'izany dia mandositra ireo squirrels avy ao amin'ny zaridainantsika izy, ka mijanona ho be atao foana izy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Mpiandry anglisy
Sary mpiandry anglisy 1
Alika kely any an-tendrombohitra cur amidy
alika inona no taolana avy any clifford
fampahalalana momba ny alika tendrombohitra bernese
Lhasa apso kely poodle Mix